MCSA 2016 လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးမှတစ်ဦးကအပြီးအစီးလမ်းညွှန် | ယင်း
7 ဇူလိုင်လ 2017
MCSA 2016 လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
အဘို့အသွားနိုင်သူ MCSA 2016 လက်မှတ်?
Microsoft ကဆာဗာကိုအခြေခံအဆောက်အဦများအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်သူ / သူမ၏အလုပ်အကိုင်ကိုစတင်ရန်လိုအပ်ပါသည်သူခွဲ။
လတ်တလောတဦးတည်းဖို့ပိုထူထောင် server မှသူ / သူမ၏အထူးပြုစွမ်းရည်ကို update လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့သူတစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူ
datacenter အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ / ဗိသုကာ
သငျသညျ MCSA 2012 သင်တဦးတည်းစာမေးပွဲ (2016) ပေးခြင်းအားဖြင့် MCSA 70743 ပေါ်တွင်သင်၏လက်မှတ်အလုံးစုံစစ်ဆေးပြုပြင်ဖို့နိုငျသောအချက်မှာ, ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း b.If
အဘယ်ကြောင့် MCSA Server ကို 2016 နှင့်အတူ
ဤသည်ဆာဗာကို operating system ကိုအုပ်ချုပ်ရေးအမျိုးမျိုးသောအဆင့်မှာသငျသညျယူနိုင်သည်ကိုအသစ်သောအင်္ဂါရပ်များတစ်တန်ဆောင် ခဲ့. , ထို့ပြင်သင့်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကယ်ဖို့သင်ကူညီခဲ့သည်။ ဤတွင်ဆာဗာ 2016 အတွက်တင်ပြအသစ်သောအင်္ဂါရပ်များစာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Software ကိုသတ်မှတ်ထားသော Datacenter
ဆာဗာ 2016, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ software ကို-defined Compute အသုံးချနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာပိုပြီးချက်နဲ့နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သော datacenter, ကမ်းလှမ်းသိုလှောင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ datacenter ထုတ်လုပ် networking ။ [မဆိုသံသယကျော်လွန်ဒီမှန်သည်လျှင်။ ]
ဆာဗာ 2016 ဒီတော့ယခုသင်တစ်ဦးကို virtual machine တအတွင်းပိုင်း Hyper-v မိတ်ဆက်ပေးနိုငျသညျ, Hyper-v အတွက်အသိုက် Virtualization ပေးထားပါတယ်။
Microsoft ကဆာဗာစင်တာထက် littler ဖြစ်သောဆိုသည့်အဆာဗာတင်ပြခဲ့ပါသည်။
ကမ်းလှမ်းမှုကိုလျှောက်လွှာအထီးကျန်မှုတွေ namespace ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသီချင်းဆိုကြလော့။
က Hyper-v ကွန်တိန်နာ
ပြတင်းပေါက်နှင့် Hyper v ကွန်တိန်နာကိုကြီးကြပ်ရန်။
ဒါဟာအဘယ်သူမျှမကအခြား configuration နဲ့အတူ HOST ကမှသင်၏ VM က interface ရန်သင့်အားဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Linux ကိုလုံလုံခြုံခြုံ Boot ကို
လက်ရှိတွင်ကျနော်တို့ Hyper-v အတွက်မျိုးဆက်2linux ကို VM ကစေနိုင်သည်။
အမျိုးမျိုးသော VM က၏အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းတောင်းဆိုမှုများလုပ်
Failover Cluster တိုးတက်မှု
azure အသုံးချဖို့အားဖြင့်မိုဃ်းတိမ်သကျသခေံ Make
သိုလှောင်မှုကို Agnostic ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအဆင့်အထိပွား
သိုလှောင်မှုကို Space ကိုတိုက်ရိုက်
storage space ကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်ရှားရေး shared SAS ၏လိုအပ်ပါတယ်။
System ကို Virtualization
System ကို virtualization ကိုသင် Sdn ရရှိ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းပေးထားပါတယ်။
ထိုသူအပေါင်းတို့အားဖြင့်ငါတို့သည် server ကို 2016 ရှိတစ်ခုတည်းသော features အသစ်မဟုတ်အကောင့်နေကြတယ်, ဒါကြောင့်အာရုံစူးစိုက်သာစုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ MCSA လက်မှတ်၌ဤထက်ပိုရပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ server ကိုနှင့်သင်၏ MCSA လက်မှတ်အပြီးသတ်မည်သည့်အခါသင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်လိမ့်မယ် 2016
installation, သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာ, DSC
IPV4 / 6, Sdn, NPS, NAP, VPN Das, virtualization စုစည်းရာကွန်ယက်အဖွဲ့။
အထောက်အထားထပ်ပြောသည်, ADRMS, ADFS, ADCS, အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုကို, Azure အေဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိ၏။